War deg deg ah: waxaa goor dhawayd furmay shirkii Rooble iyo xubnaha musharraxiinta mucaaradka.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii War deg deg ah: waxaa goor dhawayd furmay shirkii Rooble iyo xubnaha...
War deg deg ah: waxaa goor dhawayd furmay shirkii Rooble iyo xubnaha musharraxiinta mucaaradka..
Wararka ka imaanaya Hotelkii lagu balansanaa ayaa sheegaya in goordhow si rasmi ah uu u billowday shirka gaarka ah ee u dhexeeya xukuumadda iyo xubnaha musharraxiinta mucaaradka, kaasi oo ka dhacaya hotelka Decale ee magaalada Muqdisho.
Qoraal kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha xilka sii-haya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa lagu yiri ” Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda JFS mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa hoteelka Decale kulan kula leh Midowga Musharaxiinta. Ra’iisul Wasaaraha ayaa kala hadlaya murashaxiinta arrimaha doorashooyinka, amniga dalka.”
Shirka u dhexeeya xukuumadda & musharraxiinta oo kusoo aaday, xilli xasaasi ah ayaa waxaa diirada lagu saarayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashada & dhaq-dhaqaaqyada ka jira magaalada Muqdisho ee caasimada dalka.
Waxa kale oo uu shirkan muhiim u yahay geedi socodka nabada ee Soomaaliya, gaar ahaan is mari-waaga ka taagan hannaanka doorashooyinka dalka ee 2021-ka.
Labada dhinac ayaa horey u gaaray is-afgarad, kadib markii Rooble uu aqbalay laba ka mid ah ah saddex qodob oo ay soo gudbiyeen musharaxiinta, kuwaas oo kala ah:-
Si kastaba waxay arrimahan kusoo aadayaan, iyada oo lagu wado in beri oo Jicmo ah uu dhaco dibad-baxa ay markale ku baaqeen xubnaha midowga musharraxiinta mucaaradka.
Previous articleMilatariga dowladaha Pakistan iyo Hindiya oo gaaray heshiis xabad joojin ah.
Next articleRacep Tayyip Erdogan oo sheegay in uu isha ku hayo xaaladda qowmiyadda Uighur ee Muslimiinta dalka Shiinaha
Bilihii la soo dhaafay waxaa dalka Koonfur Afrika kusoo batay dhibaatoyinka isugu jira dilka, dhaca dalkaas loogu geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee kamid ah kuwa...